Afhayeenka Aqalka Sare: Shacabku uma baahna kala adkaansho ee wuxuu u baahan yahay wada adkaansho – Kalfadhi
Guddoomoyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa ku baaqay in la sii xoojiyo, oo la dhameystiro, laguna taageero Aqalka uu hogaamiyo soo afjaridda khilaafka ka dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Dowlad Goboleedyada, taas oo uu sheegay in, kadib markii uu Aqalku bilaabay inuu galo, uu ka keenay natiijo fiican oo, sida uu sheegay, wali u baahan dhameystir. “Waan qabnaa hawshaas (Xalinta Khilaafka DFS iyo DG) in la sii wado, meel dhexee mareysaayee” ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Xaashi.
Guddoomiyaha, oo xalay ka hadlayey Xafladdii Caleema-saarka Deni iyo Karaash, waxa uu sheegay in ay qasab tahay in loo dhaqaaqo mideynta dadka, oo aan la sii kala geyn. Waxa uu sawiray sida uu shacabku ugu baahan yahay nabad iyo ammaan. “Shacabka Soomaaliyeed waxa uu baahan yahay nabad iyo hishiis, si looga baxo dhibta ina haysata hadda” ayuu yiri Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. “Uma baahna kala adkaansho ee wuxuu u baahan yahay wada adkaansho” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Isagoo aad ugu dheeranaya, sharaxayana sida uu dastuurku u farayo, waxa uu Guddoomiye Cabdi Xaashi sheegay iney muhiim tahay inuu Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hogaan u noqdo ka mira dhalinta hadalkiisa ah in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Dowladaha Xubnaha Ka ah Federaalka, sida uu hadalka u dhigay. “Codsigeygu waa in arrimaha yar (khilaafka yar) ee jira la dhameeyo” ayuu yiri Guddoomiyuhu.
Baaqaas Guddoomiyaha iyo mid ka sii horeeyey, oo madaxdii iyo masuuliyiintii ka hadashay Munaasabaddii Caleema-saarka Madaxweynaha Puntland iyo Kuxigeenkiisa ay ku xusayeen qudbadahooda, waxaa soo afjaray Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo sheegay inuu gali doono xal ka gaarista khilaafka dowladdiisa kala dhaxeeya Dowlad Goboleedyada. “Waxaana balan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin Dowlad Goboleedyo” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo intaas sii raaciyey “Bacdamaa aan ahay odaygii u dhaxeeyayna, Iinshaa Allaah anaa dhex galaaya, oo hawlahooda xalinaaya”.